Umlingisi weMbewu uyiphila ngempela eyobungoma
Umlingisi weMbewu u-Eugene Cele odlala indawo yesangoma uNkanyamba iyamjabulisa indawo ayidlalayo yokuba isangoma ngoba uyiphila ngempela Isithombe SITHUNYELWE
UMLINGISI, u-Eugene Cele odlala indawo yesangoma uNkanyamba, esisetshenziswa uNkululeko Bhengu kwiMbewu, uthi ayikho into emjabulisa njengokudlaliswa indawo yento ayazi ukusuka nokuhlala.
U-Eugene ongowokuzalwa eLamontville, eThekwini usho kanje kwazise empilweni yakhe yangempela uyisona vele isangoma.
Elandisa Isolezwe uthi ucingo aluthola lumtshela ukuthi uzodlala indawo yokuba isangoma lwamjabulisa kakhulu.
“Ngangijatshuliswa ukuthi ngiyazi ukuthi indawo engiyoyidlala, yinto engiyiphilayo empilweni yami yangempela ngakho akukho okube nzima ekutheni ngingene khaxa kule ndawo,” kusho u-Eugene.
Indawo edlalwa u-Eugene ivele emva kokubulawa kukaThokozile, ongunina kaNkululeko kulo mdlalo.
UThokozile obeqe ejele nezinye iziboshwa, ubulawe uKhanyo Bhengu ezama ukuvikela unina, ukaMadonsela. Bathi uma bebona ukuthi sebembulele, benza indlela yokuthi bayomlahla ehlathini.
Kuthe uma kutholakala isidumbu sakhe, elimele, abaningi kulo mdlalo, baba nemibuzo ngokuthi ubulawe ubani. Iye ngokuqina imibuzo ikakhulukazi kuNkululeko ngesikhathi ethola ukuthi unina uyaziveza kuKhanyo nokuyilapho ekhethe ukuthi aye esangomeni esinguNkanyamba ayobheka ukuthi lokho kudalwa yini.
Echaza ngale ndawo ayidlalayo u-Eugene uthe kwesinye isikhathi baye bakuthole kunzima ukuthi beyizangoma babhadlaze iqiniso linjengoba linjalo ngoba kwesinye isikhathi, umthelela walokho kuye kube ukuchitheka kwemindeni.
“Uma kufika ubaba wekhaya kuwe ezobheka izinto zakhe ehamba nonkosikazi wakhe, kuvele indaba yokuthi uneshende, kufanele uthole indlela engezoqhatha umndeni ukuthi uveze lokho. Ngenze okufanayo ke nakuNkululeko ngesikhathi ezobheka indaba yokuthi kungani unina eziveza kuKhanyo. Ngimbuze umbuzo wokuthi yini ehlanganisa uKhanyo noNgcolosi, ngase ngithi kufanele aqaphele abantu abayizinyoka abamzungezile,” kuchaza u-Eugene.
Uthi ayikho into ayithokozela njengokudlala le ndawo, athe isazolokhu ikhona kulo mdlalo ngoba uNkululeko usazolokhu elufuna usizo lwakhe uNkanyamba.
Uthe kumjabulise kakhulu ukuthi ababhali beMbewu balwenzile ucwaningo lwabo ngokusebenza kwezangoma.
“Into ebayivezayo kwabakubhalile, iyo ngempela le eyenzeekayo empilweni yabantu yangempela, uma bebhekene nezinkinga ezidinga usizo lwezangoma,” kusho u-Euguene.